Ijoollee Afrikaa Hedduutti Dorgommiif Afrikaa Kibbaatti Yaahuutti jira
Wiixata, Guraandhalaa 08, 2016 Local time: 02:42
Taphattoota Ciccimoo Kubbaa Miila Afrikaa Filadhaa
WASHINGTON,DC— Dorgommiin waancaa Afrikaa 19essoo Afrikaa Kibbaatti taphatanii biyya 16 walti qophaahuutti jira.Guyyaan FIFA-n,Fedireeshiiniin Kibbaa Miilaa Addunyaa akka biyyootii nama isaanii ka taphatu qopheeffadhaa fixadhaa jedhe guyyaa dheengaddaati,namuu nama isaa 23-23 filatee qixeeffate.
Biyyitii hagii tokkoo,ta akka IVORY COAST,faan ijoollee isaanii alaa qaban hedduu fidatan.Itoophiyaan dorgommiin duratti nafa oowwifachuu fi humna ufiillee haga ilaallachuuf amma Qaataar jirti.Biyyitii ganna 31 keessatti barana waancaa Afrikaatti dorgomuuf dabarte tun maan keessa jirti?
Akka obboo Mokonnin,Kuruu Itti Gaafatamaan Damee Ogummaa fi Teknikaa Federeshiinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaa jedhetti gareen isaanii akka dansaa qopheefote.Taatullee nama hedduu alaa yaamanillee amma nama tokkotti garee tanatti dabalamee qophiitti jiraa jedha.
Itoophiyaan Naayjeeriyaa,Burkiinaa Faasoo fi Zaambiyaa waliin taphatti,hagam qophooftan jennaan “akka gaariitti qophoofnee..wanata barbaachisaa hunda guunneera..qabxii galmeessuuf deemna.”
Woma taateefuu ijoollee Afrikaa hedduutti dorgommii Waancaa Afrikaatiif Afrikaa Kibbaatti yaahuutti jira.
Gama kaaniin ammoo atilleetotii Itoophiyaa;Genzebee Dibaabaa,Geetaacho Tarfaasaa fi Faaxee Saaddoo dorgommi Biritishii fi Chaaynaa moohatanii badhaasa guurratan.
Genzebeen dorgommii qaxxaamuraa M5000 moohattee,Geetachoo fi Faaxeen ammoo maratoonii KM42 Chaayinaa,Jaamiitti dorgomanii horii guddaa badhaafaman.
Mee tana ammoo caqasaai
Most ViewedHiriira Jalduu fi Bulee Horaa, Deebii Angawaa Gujii“Mootumman Itoophiiya Tarkkanfii Oromiyaa Kessatti Fudhate Dogoggora Ta’u Amanee jira,” Ministirii Dhimma-alaa Yunaaytid Isteetsitti Itti Aantuu Ministeera Dhimmoota Afrikaa.KFO: Ajjeechaa Oromiyaa Keessatti Geggeessame Ka Qoratu Qaamni Walabni Hundeessamuu QabaMormii Qellem Wallagga Keessaa fi Bakkawwan BirooAngawoonni magaalaa Adaree fi kan Bulee Horaa maal jedhu? Walisoon maal keessa turte?Most Listened Gabaasa guutuu armaan gaditti dhaggeeffadhaa Gabaasaa guutuu dhaggeeffadhaa Gabaasni sagalee kunooti Guutummaa qophii keenyaa dhaggeeffadhaa Guutummaa gabaasaa kanaa dhaggeeffadhaa